राजेश हमालसँग ट’क्कर लिन दीपाको हैशियत पुग्दैन भन्दै गर्जिए पुण्य ! डिप्रेसनमा छिन् दीपाश्री ? (भिडियो सहित)
हालै कलाकार दीपाश्री निरौलाले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अभिनेता राजेश हमाललाई ‘उहाँ महानायक हो र!’ भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको व्यापक आलोचना भयो । यस विषयमा नायिका तथा निर्देशक निरौलाले हमालका फ्यानसँग माफी नै माग्नुपर्‍याे ।
यसै विषयमा सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतमले आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले राजेश हमाललाई हिच्याएको अहिलेका पुस्ता कसैमा पनि नदेखेको र महानायक होइन भन्ने हैसियत दिपाश्रीको नभएको बताएका छन् । राजेश हमाललाई हिरा र सुनसँग दाँज्दै उनले नायकहरुको पनि नायक, सबैभन्दा उत्कृष्ट नायक राजेश हमाल नै भएको बताएका छन् ।
दिपाश्रीप्रति ब्यङ्ग गर्दै उनले २/४ वटा फिल्म गर्दैमा चुरीफुरी गर्ने अनि फेरी हराउने भन्दै राजेश हमालले २५ वर्षदेखि नेपाली सिनेमालाई अगाडी बढाएको र राजेश हमालको नाम नै काफी भएको उनले बताए । हेर्नुस् पुण्य गौतमसँग गरिएको कुराकानी तलको भिडियोमा :